DBF Qalabka Dayactirka. DBF Soo kabashada Software. DBF Hagaaji Qalabka.
DataNumen DBF Repair waa ugu fiican DBF qalab kabashada adduunka. Waxay hagaajin kartaa musuqmaasuqa DBF keydinta faylasha iyo soo kabashada inta ugu badan ee xogtaada ah ee suurtogalka ah, taas oo yareyneysa luminta musuqmaasuqa faylka.
4.90 / 5 (laga bilaabo 1,458 cod)
maxaad DataNumen DBF Repair?
Noocyada Muhiimka ah ee DataNumen DBF Repair v2.4
Taageer dhammaan noocyada DBF keydka macluumaadka, oo ay ku jiraan dBASE III, dBASE IV, dBASE 5 oo ah qaadashada, dBASE 5 ee Windows, FoxBase, FoxPro, Visual FoxPro, iwm.
Taageero lagu dayactirayo DBF faylasha leh xusuusta ama macluumaadka binary ee ku keydsan faylasha DBT ama FPT.
Taageero si loo kala qaybiyo DBF faylka marka cabirkiisu gaaro xaddidan horay loo sii cayimay, gaar ahaan, taageerada kala-qaadka weyn ee 2GB DBF files.
Taageer in loo kala qaybiyo miiska marka tirintooda duleedku ay gaarto tiro goobeed ugu badnaan la sii cayimay.
Taageero si loo saxo DBF faylasha ku jira warbaahinta khaldan, sida diskiga diskiga, Zip saxannada, CDROM-yada, iwm.
Taageero si loo dayactiro qayb ka mid ah DBF files.
Taageero si loo helo oo loo xusho DBF faylasha lagu hagaajinayo kombiyuutarka deegaanka.
Taageer isdhexgalka Windows Explorer, si aad u dayactiri karto DBF ku fayl garee liiska macnaha guud ee Windows Explorer si fudud.
Isticmaalka DataNumen DBF Repair inuu ka soo kabsado Khasaaraha DBF Macluumaadka
Marka xogtaada dBase, FoxBase, FoxPro iyo Visual FoxPro (.dbf faylasha) way waxyeeloobeen ama musuqmaasuqeen oo si caadi ah uma furi kartid, waad isticmaali kartaa DataNumen DBF Repair si loo baaro dbf faylasha iyo soo kabsadaan xogta faylasha sida ugu macquulsan.
Fiiro gaar ah: Kahor intaadan soo ceshan wixii dhaawac ama musuqmaasuq ah dbf Fadlan la soco DataNumen DBF Repair, fadlan xir wixii barnaamijyo kale ah ee wax ka beddeli kara dbf gudbiso.
Xullo waxyeelada ama musuqmaasuqa dbf faylka la dayactirayo:
Waad ku dari kartaa dbf si toos ah filename ama guji badhanka si aad u caleenta u xulato feylka. Waxa kale oo aad riixi kartaa badhanka si aad u hesho dbf faylka lagu hagaajinayo kombiyuutarka deegaanka.
Sanduuqa combo , waxaad sidoo kale dooran kartaa qaabka isha dbf faylka Xilligan qaababkan soo socda ayaa la taageeray:
Sida caadiga ah, qaabka ayaa loo dejiyaa "Auto Detect" sidaa darteed DataNumen DBF Repair ogaan doonaa qaabka isha dbf faylka iyo soo saarida midka go'an sida ku xusan qaabka la ogaaday. Si kastaba ha noqotee, haddii feylka wax soo saarka aan si guul leh loogu furi karin codsigaaga, markaa waad cayimi kartaa qaabka lagu qasbayo DataNumen DBF Repair si loo soo saaro feylka qaabka ku habboon codsigaaga.
Marka la eego, DataNumen DBF Repair badbaadin doonaa go'an dbf keydka macluumaadka faylka cusub ee loo yaqaan xxxx_fixed.dbf, halka xxxx uu yahay magaca isha dbf faylka. Tusaale ahaan, il ahaan dbf faylka Waxyeellodbf, Magaca asalka ah ee faylka go'an waa la dhaawici doonaa_fixed.dbf. Haddii aad rabto inaad isticmaasho magac kale, markaa fadlan dooro ama u dhig si waafaqsan:
Click ah batoonka, iyo DataNumen DBF Repair doonaa start iskaanka iyo hagaajinta isha dbf faylka. Bar horumarka
Nidaamka dayactirka ka dib, haddii isha laga helo dbf keydka macluumaadka waxaa lagu hagaajin karaa si guul leh, waxaad arki doontaa sanduuqa farriinta oo sidan ah:
Hadda waxaad furi kartaa go'an dbf ku fayl garee codsiyada u dhigma.
DataNumen DBF Repair 2.4 waxaa la sii daayay Diseembar 23, 2020
DataNumen DBF Repair 2.2 waxaa la sii daayay Nofeembar 6th, 2020
DataNumen DBF Repair 2.1 waxaa la sii daayay Nofeembar 10th, 2019
DataNumen DBF Repair 2.0 waxaa la sii daayay 24 Ogosto, 2013
DataNumen DBF Repair 1.6 waxaa la sii daayay Maarso 24th, 2008
Taageero si loo kala qaybiyo DBF faylka marka cabirkiisu gaaro xaddidan la cayimay.
Taageer Windows Vista.
DataNumen DBF Repair 1.5 waxaa la sii daayay Luulyo 12th, 2006
Ku dar xakameyn badan DBT / FPT soo kabashada faylka.
Hagaajinta waxtarka mashiinka soo kabashada.
DataNumen DBF Repair 1.4 waxaa la sii daayaa 5da Diseembar, 2005
Hagaaji habka warbixinta qaladka.
Taageero dib u soo kabashada beeraha binary
Dayactir Microsoft musuqmaasuq SQL Server Macluumaadka MDF.